Armaajo alwaax ah oo la socda qol kasta oo gurigeenna ah | Bezzia
Armaajo alwaax ah oo la socda qol kasta oo gurigaaga ka mid ah
Susana godoy | 02/06/2021 16:00 | Qurxinta
Markaan ka fikirno qurxinta, way cadahay taas armaajo alwaax ah Iyagu waa mid ka mid ah xulashooyinka aynaan marnaba seegi doonin. Runtii iyagu waa lama huraan mana ahan kaliya hal qol oo guriga ah laakiin dhowr ah. Waxaan jecel nahay sida faahfaahinta qurxinta laakiin sidoo kale sidii cutub kayd ah.
Sidaa darteed, had iyo jeer waxaa jiri doona mid ku habboon baahiyaheena laakiin sidoo kale qol kasta. Sidaa darteed, waxaan dib u eegis ku sameyneynaa dhammaan kuwa naga saari doona degdegga isla markaana isla markaa daboolaya gees walba. Ma rabtaa inaad ogaato sida qolal kasta ku qurxi iyaga?
1 Ardaallo dhaadheer oo alwaax ah si loogu qurxiyo qolalka fadhiga
2 Armaajo alwaax ah oo loogu talagalay miiska ama meelaha xafiisyada
3 Fagaarayaasha hoose ee qolalka carruurta
4 Khaanadaha ku habboon qolka jiifka
5 Hoos u dhigid iyada oo aan lahayn qaybinta booska hoose
Ardaallo dhaadheer oo alwaax ah si loogu qurxiyo qolalka fadhiga
Malaha qolka fadhiga waxaan rabnaa inaan aragno sida khaanadaha dhaadheer iyo kuwa cidhiidhiga ahi waxay fadhiyaan aag ballaadhan. Waa run in hal dhinac, si aad awood ugu yeelatid inaad dhigto buugaagta, waxaad had iyo jeer ku sharxi kartaa munaaradaha dhaadheer iyo kuwa cidhiidhiga ah. Laakiin sidoo kale waxaan ognahay in curinta qaabaysan ay ka mid tahay fikradaha waaweyn. Tani waa inaan dhigan karno dhowr khaanadahaan, midba midka kale. Markaa waxaan samayn doonnaa halabuur aad u weyn haddii taasi dhadhankeennu tahay iyo haddii booska u oggolaado. Laakiin ha ahaato sida ay dhici karto, haa in qolalka fadhiga ay ku sharad badan yihiin khaanadahaas sidii munaarado.
Armaajo alwaax ah oo loogu talagalay miiska ama meelaha xafiisyada
Waa run oo ma jirto hab gaar ah oo loo qurxiyo, maxaa yeelay way noqon karaan kuwo aan la koobi karin maaddaama ay jiraan dhadhanno. Laakiin xafiisyada ama qolalka waxbarashada, waxaan ku sharxi karnaa khaanadaha. In sidan, Waxaan sidoo kale dhigi doonaa buugaagta ama feylasha waana la sii ururin doonaa maadaama ay ku yaalliin darbiyada. Iyaga ayaynu ku badbaadin doonnaa meel badan, maaddaama ka faa'iideysiga derbiyada had iyo jeer ay tahay mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee aan haysanno.
Agagaarka khaanadaha waxaan sidoo kale dooran karnaa khaanadaha laba jibbaaran ee lagu dari karo darbiyada siyaabo aan sinnayn. Sidaa awgeed, waxaan ku abuuri doonnaa waxtarka asalka ah qurxintayada. Waxa ugu fiican ee ku saabsan khaanadaha alwaaxa iyo qaababkoodaba waa inaan isugu dari karno sidaan rabno oo xitaa aan u rinjiyeyn karno haddii aad u aragto inay lagama maarmaan tahay. Sababtoo ah midabada sidoo kale waa mid ka mid ah faahfaahinta qurxinta ee aan marwalba u baahanahay.
Fagaarayaasha hoose ee qolalka carruurta
Qolalka jiifka ee ugu yar guriga, sidoo kale waxaan u baahanahay taxane taxane ah oo naga caawinaya inaan keydinno dhammaan waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan iyo buugaagta. Sidaa darteed, ma jiraan wax la mid ah sharadka jibbaarada sidoo kale. Kuwani waxaa laga heli karaa midabbo kala duwan waxayna noqon doonaan kuwo kaamil ah sida loogu raaxeysto jawi ka nolol iyo farxad badan guud ahaan. Marka lagu daro dhammaan moodooyinka aan heli karno, waa in la yiraahdaa waxaan u baahanahay inay ahaato alwaax adkaysi leh, maxaa yeelay waxaan horay u ognahay inaanan doonaynin shilal aan loo baahnayn.
Khaanadaha ku habboon qolka jiifka
Mid kale oo ka mid ah aagagga waa qolka jiifka. Sidaa darteed, waxaan uga baahan nahay inay daboolaan baahiyaha ka jira aaggan iyo wixii ka sarreeya, waxay diiradda saarayaan qaybta madaxa. Marka halkan waxaan ka heli karnaa shelfyo qaar kaydiya wixii lagama maarmaanka u ah saacadaha alaarmiga, buugaagta iyo walxaha kale ee qurxinta. Laakiin sidoo kale waa run in aad dooran karto istaandarka iyo qaabdhismeedyada qaabdhismeedka ah, had iyo jeerna waxay kuxirantahay meelaha bannaan ee aad haysato. Waa fikrad fiican inaad awood u yeelato inaad siiso hal-abuur taabasho ah adigoo isku dayaya inaad ku hayso wax kasta oo aad ugu baahan tahay dhexdooda. Haddii aadan haysan meel bannaan, waxaad horeyba u ogayd in gidaaradu weli yihiin saaxiibbadayada ugu fiican.
Hoos u dhigid iyada oo aan lahayn qaybinta booska hoose
Markaan dooneyno inaan xadidno meelaha, waxaan leenahay mid aad u fudud. Waxaan ku khamaari karnaa fikrad sidan oo kale ah oo ku saleysan ku raaxeysiga shelf aan salka lahayn, taas oo ah, furfuran, iyo u dhigis kala sooc labada qol ee fadhiga iyo qolka cuntada iyo meelaha laga soo galo. Fikrad hal abuur leh oo kaamil noqon doonta si aad ugu biiri karto dhammaan qaababka qurxinta ee maskaxda ku haysa. Ma jeceshahay armaajo alwaax ah? Xagee dhigeysaa iyaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Armaajo alwaax ah oo la socda qol kasta oo gurigaaga ka mid ah
Baro Bloom, aruurinta SS21 ee Compañía Fantástica
Fikradaha manicure-ka ee xaaqi doona xagaagan 2021